ကားအပိုပစ္စည်းများ၊ Ford Ranger ရေနံစုပ်စက်၊ ရောင်းရန် Shock Absorbers - Nitoyo
ထက် 180 နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ
ဖောက်သည် 400 ကျော်
After-sales service နှင့်ပညာရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံဥာဏ်
SICHUAN NITOYO AUTO SPARE PARTSCO ။ LTD
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ရှိနာမည်ကြီးမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စ၍ အပိုပစ္စည်းများအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ငွေကိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကားများ၊ Pick-up၊ ဗန်၊ ဘတ်စ်ကား၊ အကြီးစား Duty၊ ထရပ်ကားများ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပမှတရုတ်ကားများအထိ။ ဤထုတ်ကုန်များကိုလက်တင်အမေရိက၊ မြောက်အမေရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ အရှေ့နှင့်တောင်ဥရောပ၊ စျေးနှုန်း!
Nitoyo သည်သင်၏ကားအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးလိုအပ်သောသင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်စျေးဝယ်စင်တာဖြစ်သည်။ အတူတူကြီးပြင်းကြပါစို့နစ်တို၊ ဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတာ ၀ န်ယူမှုရှိသောအရောင်းအဖွဲ့နှင့်အရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ ယ်ယူမှုနှင့်အမိန့်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနနှင့်အတူရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ ယ်သူများအတွက်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်း ၀ ယ်ရေးနှင့် ၀ ယ်ယူရေးဌာန၏လုပ်ငန်းကိုယာဉ်စနစ်နှင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ထူးခြားချက်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကို၎င်းတို့၏လက်တွေ့ကျသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးပစ္စည်းများ - လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင့်လျော်သောအချိန်တွင်သင့်အားကင်ညာနိုင်ငံမှ FORM-F၊ EGYP သံတမန်ဌာန၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်ဌာနသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုမိုးရှင်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမွမ်းမံခြင်းကိုအာရုံစိုက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် Facebook နှင့် LinkedIn တို့ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်ပြီးကြောင်းသေချာပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုအားလုံးအထက်မှာ Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသေချာစေသည့်ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပါဝင်သည်။
NITOYO သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ ကားအစိတ်အပိုင်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များတည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်စက်ရုံများ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။
ကားအစိတ်အပိုင်းများ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ကားများ၊ Pick ~ up / Van / Bus / Heavy Duty / Truck / Forklift စသည်တို့အတွက် NITOYO အကွာအဝေးနှင့်ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်ကားများဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုသေချာစေရန် NITOYO ။
ထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စုံစမ်းရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုသေချာစေရန်ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများရှိသည်။ NITOYO စျေးနှုန်းသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးစက်ရုံများထက်မြင့်မားမည်မဟုတ်ပေ။
SICHUAN FOREIGN TRADE GROUP မှဆင်းသက်လာခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်ခိုင်မာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင်၏ငွေကိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်။
NITOYO သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရောင်းချပြီးနောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအမိန့်အားလုံးကိုတာဝန်ယူပါသည်။
LATIN EXPO, APPEX, LAS VEGAS, AUTOMECHANIKA DUBAI, CANTON FAIR စသည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းပြပွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်စဉ်ပါ ၀ င်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုပြသရန်နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ပြောဆိုရန်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် liveshow ကိုအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်သည်။
မစ်ဆူဘီရှီ Fuso Canter
Nissan က Navara
Nitoyo ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများပါဝါ PTO Ge ...
NITOYO အရည်အသွေးမြင့်ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ Crown Wh ...
NITOYO အရည်အသွေးမြင့်အော်တိုအင်ဂျင်စနစ် Turbocha ...
အပြည့်အဝအကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုသော Nitoyo Car Brake caliper
NITOYO အရည်အသွေးမြင့်သောလေယာဉ်ထိန်းရပ်နားထ ...
ကြီးမားသောလုံလောက်သောဂိုဒေါင်တစ်ခုကသင့်အားမြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်ပေးသည်
၂၁ နှစ်ကျော် Nitoyo သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံသည့်နှစ်သက်ဖွယ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
NITOYO နှစ်လယ်ပိုင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်မျှဝေခြင်း SE ...
၂၉ ရက်၊ ဇွန်လ Nitoyo သည်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကိုပိတ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများစွာသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကို ...
စတီယာရင်စက်၏အကြောင်းရင်းမှာထူးဆန်းသောဆူညံသံ - ၁။ စတီယာရင်ကော်လံကိုအလဟ not မဖြစ်၊ ပွတ်တိုက်အားကြီးသည်။ 2. စတီယာရင်ပါဝါဆီကိုစစ်ဆေးပါ ...
AUTOMECHANIKA SHANGHAI မှ NITOYO
ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်မှ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ NITOYO သည်အမျိုးမျိုးသောနမူနာများနှင့်အတူ AUTOMECHANIKA တွင်ရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေဟောင်းနှင့်မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက ...
NITOYO ၁၂၈ ကြိမ်မြောက်ပြပွဲတွင်
၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ Nitoyo သည် 128th Canton Fair သို့အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းများကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရေနွေးငွေ့နှင့်အပူချိန် ၁၈ ကြိမ်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဈေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၈ ထပ်၊ အမှတ် ၂၊ Tongfu Xiang၊ Xiyulong လမ်း၊ Chengdu, Sichuan, PRChina 610015